Cunnooyinka Anticancerka: Cunnadu waxay samayn kartaa isbeddel | Ragga Stylish
Cuntooyinka ka hortagga kansarka
Michael Serrano | | Ku habboon, Caafimaadka
Ma ogtahay in xulashadaada cuntada ay kaa caawin karto kahortaga kansarka? Waa waxa loo yaqaan cuntooyinka lidka ku ah kansarka, waana wax aad uga badan intaad moodeysid.
Soo ogow waxay yihiin cuntooyinkani. Laakiin xusuusnow inaysan ku filneyn mid, laakiin waa inaad isku dartaa iyaga si aad u ogaatid saameyntooda. Markasta oo ay sii badato.
1.1 Midabka cagaaran
1.2 Midab casaan
2.1 Cunnooyinka Antioxidant-ka
6 Cunnooyin badan oo lidka ku ah kaansarka oo la tixgeliyo
6.2 Shaah cagaaran
7 Cunnooyinka looga fogaado
Khudaartu kama maqnaan karto qorshe cunid kasta oo loo arko inay caafimaad tahay. Kooxdaan cuntada waxay hodan ku tahay walxaha ka hortagga kansarka. Intaa waxaa sii dheer, kordhinta qaadashada khudaartaadu waa istiraatiijiyad aad u fiican oo lagu ilaaliyo culeyska iyo cayilka badan, laba xaaladood oo la xiriira cudurro badan, oo ay ku jiraan dhowr nooc oo kansar ah.
Khudaarta cagaaran waxay leeyihiin qiyaas xiise leh oo ah fiber, folate iyo carotenoids, walxaha muhiimka ah si looga hortago kansarka. Qashin-qubka, isticmaalka saladhka, kale, chard iyo isbinaajka ayaa lagula talinayaa. Sababtoo ah kaalinteeda fiitamiin B9, dhir ayaa sidoo kale loo tixgeliyaa xulafada dagaalka ka dhanka ah kansarka.
Khudaarta Cruciferous waxaa ku jira waxyaabo ka caawin kara kahortaga kansarka iyo cudurada kaleSidoo kale sidoo kale tixgeli cunnooyinka soo socda: broccoli, cauliflower, kaabajka, sprouts Brussels, iyo kale.
Mahadsanid Lycopene - walax mas'uul ka ah midabka casaanka ah ee khudraddan - iyo walxaha kale, yaanyada waxay kaa caawin kartaa yareynta halista dhowr nooc oo kansar ah, oo ay ku jiraan kansarka qanjirka 'prostate'. Sida muuqata, muhiim maahan in dhammaantood la wada cuno, laakiin awoodda ka hortagga kansarka ayaa la ilaaliyaa markii loo beddelo casiir ama suugo, xitaa way sii kordhi kartaa mararka qaarkood.
Casiir liin dhanaan ah, qaraha iyo strawberries ayaa bixiya folate, fitamiin kooxda B ah oo ka hortagta noocyada kala duwan ee kansarka.
Thanks to antioxidant iyo anti-bararka guryaha, canabku waa miro kale oo weyn haddii aad rabto inaad kordhiso awoodda ka-hortagga kansarka ee cuntadaada.
Fiiri maqaalka: Ka hortagga dabiiciga ah. Halkaas waxaad ka heli doontaa habab badan oo lagu kordhiyo awoodda antioxidant ee cuntadaada.
Berries waxay ka kooban yihiin antioxidants awood badan, oo labadaba ka hortagi kara kansarka isla markaana gaabin kara koritaankiisa. Daraasad dheeri ah ayaa wali loo baahan yahay, laakiin waxba kama lumi doontid adoo ku daraya strawberries, raspberries, blueberries, iyo miraha kale ee cuntadaada. Subaxnimadu waa waqtiga ugu wanaagsan ee maalintii lagu raaxaysto cuntooyinkan. Isku dar iyaga badarkaaga quraacda ama yogurtada qadada.
Maaddaama ay ku darsatay folate, abuurka gabbaldayaha waa ikhtiyaar weyn.
Haddii aad rabto inaad hesho cunto caafimaad leh oo ka hortagga kansarka, digiraha waa lama huraan. Digirta, tusaale ahaan, waxay ka kooban tahay maadada jirka loo yaqaan 'phytochemicals', oo ka hortagi karta lana dagaali karta kansarka. Waxay kaloo bixiyaan folic acid, walax kale oo loo arko inay door muhiim ah ka ciyaareyso ka hortagga cudurkan.
Hubso in badarka ku jira cuntadaada ay ku siiso folic acid. Waayo, sharad ku sameyso miraha isku wada jira iyo badarka quraacda ee lagu xoojiyay fitamiinkan muhiimka ah.
Cunnooyin badan oo lidka ku ah kaansarka oo la tixgeliyo
Ukuntu waa isha wanaagsan ee fiitamiin B9. Sidaa awgeed, ku darista qorshahaaga cunnada waxay kaa caawin kartaa la dagaallanka kansarka.
Waxay ku saabsan tahay mid ka mid ah cuntooyinka lidka ku ah kansarka. Sida lagu sheegay cilmi baarista, cabitaankani wuxuu ka hortagi karaa dhowr nooc oo kansar ah, oo ay ku jiraan qanjirka 'prostate', 'colon' iyo beerka.
Haddii aad jeceshahay xawaashyada qalaad, waxaad u maleynaysaa inaad horey ugu haysatay weel caws ah jikadaada. Hadana haddii aadan wali ku isticmaalin suxuuntaada, waa inaad bilowdaa inaad sameyso, tan iyo ayaa lala xiriiriyay faa'iidooyin caafimaad oo fara badan, oo ay ku jiraan la dagaallanka kansarka.
Waxaan aragnay cuntooyinka lidka ku ah kansarka, laakiin waxa ku dhacaya kuwa ku yeelan kara saameyn lid ku ah. Marka laga hadlayo kahortaga kansarka iyadoo loo marayo cuntada, waxa ku jira ayaa muhiim u ah wixii ka soo hadhay gaadhigii dukaamaysiga.
Dareenkan, cuntooyinka leh sumcadda ugu xun waa hilibka la warshadeeyay. Cunista sausaska iyo cuntooyinka kale ee siyaado ah waxay kordhisaa halista kansarka, gaar ahaan xiidanka iyo caloosha.
Sidoo kale waxaa lagugula talinayaa inaad xakameyso qaadashada cabitaanka khamrigaIyadoo laba cabitaan maalintii ay tahay xadka ay dejiyeen khubaradu. Ku-xadgudubka khamriga wuxuu kordhinayaa halista dhowr nooc oo kansar ah, oo ay ku jiraan kuwa hunguriga iyo beerka.
Waxaa jira dad badan oo ku barakiciya cunista miraha iyo khudradda iyagoo doorbidaya cunnooyinka hodanka ku ah sonkorta. Tani maahan fikrad wanaagsan, maadaama tani ay waayi doonto fursadda helitaanka nafaqooyinka caawiya kahortagga cudurkan. Intaas waxaa sii dheer, isticmaalka kaloorigu cirka ayuu isku shareeraa wuxuuna kordhiyaa halista buurnida. Sidaa darteed, ugu beddelo qayb ka mid ah cuntooyinkaaga sonkorta leh - khudradda iyo khudradda. In kasta oo ay sidoo kale ku jirto sonkor, miro aad ayey ugafiican tahay macmacaanka ama jalaatada, maadaama, labadan ka duwan, waxay u maleyneysaa qiyaas wanaagsan oo nafaqooyin ah.
Ugu dambayn, markasta oo ay suurta gal tahay, sharad hab jilicsan oo caafimaad leh hababka karinta, sida uumiga. Taasina waa in karinta cuntada heerkulka sare ay horseeddo sameynta walxo taxane ah oo kordhin doona halista kansarka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Cuntooyinka ka hortagga kansarka
Cuntooyinka hodanka ku ah macdanta
Ragga ugu labiska wanaagsan